प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सुरु भएको सत्ता समीकरणको रस्साकस्सी छलफल, संवाद र आरोपप्रत्यारोपमै सीमित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहिर्गमन खोजिरहेको माओवादीले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
औपचारिक रुपमा ओलीको राजीनामा मागेको कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरिरहेको छ । कांग्रेसको २० चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सभापति शेरबहादुर देउवा अझैं नयाँ सरकार गठनबारे खुलेर बोलेका छैनन् । सभापति देउवाले औपचारिक अग्रसरता लिएका छैनन्। माओवादी केन्द्र र जसपासँग देउवाले औपचारिक संवाद गरेका छैनन् । कांग्रेसले पर्याप्त पहल लिन नसक्दा गठबन्धन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। देउवाले पार्टीभित्रको दबाबका कारण निर्णय गरे पनि मानसिक रूपमा तयार नभएको आरोप पौडेल पक्षको छ। देउवाले आफू निकटस्थलाई अवस्था परिपक्व नभएसम्म कुनै कदम नचाल्ने भनेका छन्।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र जसपाले स्पष्ट ढंगले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा ग्यारेन्टी देउवाले खोजिरहेका छन् ।कांग्रेसलाई गठबन्धनको सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र र जसपा दुवै पार्टीको साथ अनिवार्य चाहिन्छ।
बरु वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दौडधुप सुरु गरेका छन् । नेता पौडेल सरकार गठनका लागि संसदमा रहेका दलहरूसँगको छलफलमा सक्रियताका साथ जुटिरहेका छन् । उनले आइतबार जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई उनकै निवास भैंसेपाटी पुगेर भेट गरेका हुन् । सो भेटमा पौडेलले नयाँ सरकारका लागि कांग्रेसलाई सहयोग गर्न नेता ठाकुरसँग आग्रह गरे ।
पौडेलले सो भेटमा जसपाका मागबारे सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद गरेर संयुक्त रूपमा समाधान खोज्दै अघि बढ्न समेत नेता ठाकुरलाई प्रस्ताव गरेका छन् । पौडेलको सो प्रस्तावपछि जवाफमा ठाकुरले भने आफ्नो दलले राखेका माग सम्बोधन गर्ने समूहलाई नै साथ दिने जवाफ दिएका थिए ।
उसो त ठाकुर अहिले सरकारसँग समेत छलफलमा छन् । सरकारइतरले पनि उनीसँग् निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । ठाकुर दुबैतिर तानातानको अवस्थामा छन् । सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री ओली र नयाँ सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको नेपाली कांग्रेसले जसपालाई आआफ्नो कित्तामा उभ्याउन वार्ता गरिरहेका छन्।
नयाँ सरकार गठनका लागि सुरुदेखि नै तातेको माओवादी आफैले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले अर्को कदम चाल्ने डर माओवादीलाई छ । ओलीइतर समीकरण नबनी समर्थ फिर्ता नलिने माओवादीको आन्तरिक तयारी छ ।
यता नयाँ सरकार गठनमा अग्रसरता लिने निर्णय गरेको कांग्रेस पनि तातेको छैन । वरिष्ठ नेता पौडेलले केही सक्रियता देखाए पनि संस्थापन पक्ष खुलेर लागेको छैन । जसपा माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको र कांग्रेस पनि दोधाररमै रहेको देखेर अनिर्णीत छ । जसपामा सत्त समीकरणका विषयमै दुई मत छ ।
नेतृत्वमा जसपाको पनि दाबी !
सत्त समीकरणमा निर्णायक बनेको संसदको चौथो ठूलो दल जसपामा ओलीइतर गठबन्धन बने सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने मत पनि बलियो बन्दै गएको छ । उसका केही नेता आफ्नै अग्रसरतामा नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेसको निर्णयमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । सो कुरा आइतबार कांग्रेस नेता पौडेलसँग पनि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले राखेको बताइन्छ ।
भेटमा ठाकुरले गठबन्धन सरकार भन्ने, तर पहिल्यै आफ्नो दलको नेतृत्वमा भनेर निर्णय गर्ने भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन् । ठाकुरको आशय गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीको पनि दाबी रहन्छ भन्ने भएको जसपा नेताहरु बताउँछन् । जसपामा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई हेरिएको छ । यद्यपि पार्टीको औपचारिक बैठक बसेर सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने निर्णय भएको छैन ।